बिग ब्यास लिगः आज सन्दीप खेल्दै, मेलबर्न सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना कति ? – Everest Dainik – News from Nepal
बिग ब्यास लिगः आज सन्दीप खेल्दै, मेलबर्न सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना कति ?
काठमाडौं, माघ २५ । अष्ट्रेलियामा जारी बिग ब्यास लिग (बीबीएल) अन्तर्गत नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आवद्ध मेलबर्न स्टार्सले आज खेल्दै छ । सन्दीपको टोलीले आज ब्रिसबेर्न हिटसँग खेल्न लागेको हो । यो खेलमा जित निकाल्न सके मेलबर्नको सेमिफाइनलमा स्थान पक्का हुनेछ । खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो ३ः२५ बजे शुरु हुनेछ ।
बंगलादेश प्रिमियर लिग (बीपीएल) र नेपालको युएई सिरिज खेलेर बीबीएलका लागि अस्ट्रेलिया फर्किएका सन्दीपमाथि मेलबर्न स्टार्सको आश बढेको छ । बीपीएल खेल्न आउनुअघि बिग ब्यासको चार खेलमा सन्दीपले ६.८१ को इकोनोमीमा बलिङ गर्दै ८ विकेट लिएका थिए । त्यसकारण पनि सेमिफाइनलअघि दुई खेल खेल्न बाँकी रहेका बेला सन्दीपको भूमिका महत्वपूर्ण रहने अनुमान गरिएको छ ।
सन्दीपले बंगलादेश प्रिमियर लिग (बीपीएल) मा सेलहेट सिक्सर्सबाट भने ६ खेलमा चार विकेट मात्र लिएका थिए । सन्दीपले युएईसँगको सिरिजमा तीन एकदिवसीयमा सात विकेट र तीन टी–२० मा पाँच विकेट लिएका थिए । सन्दीप मेलबर्न टिममा फर्किएसँगै लिएम प्लङकेटको स्थान गुमेको छ । प्लङकेटले आठ खेलमा १२ विकेट लिएका थिए । उनको इकोनोमी रेट भने ८.२२ पर ओभर रहेको थियो । यसैले सन्दीप किफायती हुने आशमा मेलबर्न टिम रहेको छ ।
बिग व्यासमा १३ खेल खेलेको होबर्ट हुरिक्यान्स २० अंकसहित शीर्षमा छ । दोस्रोमा १६ अंकसहित १३ खेल खेलेको सिड्नी सिक्सर्स रहेको छ । तेस्रोमा १४ खेलमा १६ अंक रहेको मेलबोन रेनेगेट्स रहेको छ । अहिलेसम्म चौथो स्थानमा रहेको मेलबर्नको १२ खेलमा १२ अंक रहेको छ । यसैले शुक्रबार ब्रिसबेनसँग हुने खेल या आइतबार सिड्नीसँग हुने खेलमा एक खेल जितेर पनि मेलबर्नले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउन सक्नेछ ।